အားကစားသတင်းများသတင်းဆောင်းပါးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Portal ဆိုက်
အားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များ Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များဆောင်းပါးဝက်ဘ်ဆိုက်(WS) Buzz Media.Share နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်.
World Wide Portal ဝဘ်ဆိုက်သည်အားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များသတင်း Global Articles.
Curation Media Global Site 「အားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ WebSite.WSl ဆောင်းပါးများ WebSite.WS around ဝန်းကျင်ရှိလူတိုင်းချစ်ကြသည်. ဒီအားကစားခေါင်းစီးသတင်းသတင်းဆောင်းပါးကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စရာဖြစ်စေသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုလိုက်နာပါ (SNS). သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ဆောင်းပါးများကိုပြန်လည်ပုံနှိပ်ခြင်းတို့အားလုံးသည်အခမဲ့ဝေစုဖြစ်သည်. ပိုမိုလွတ်လပ်သောဘဝပုံစံကိုရယူပါ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!
It’s hard to go out withagirl who is better atasport than you are. Unlike most girls who grew up playing with dolls or dressing up in their mother’s clothes and shoes, my girlfriend Cindy’s favorite recreation is ping pong. She had been playing the game since she was five years old and is nowamember of her school’s ping pong team. ဟုတ်တယ်, she’s that good. I also knowathing or two about ping pong and actually considered myself quite handy at the game. ဒါက, ဦး […]
Baseball sunglasses are as important as any other protective bodywear inagame. Sports sunglasses are indispensable in daylight games. သူတို့ကိုမပါဘဲ, trying to catchaball, particularlyaball hit up high, can be difficult. The sun in your eyes can cause eyestrain and increase the chance that the ball will be missed. According to Prevent Blindness America, ထက်ပိုပြီး 40,000 peopleayear suffer sports-related eye injuries. Sports eyewear comes inavariety of shapes and sizes. Many baseball sung […]
I’m sitting in the ‘Classic Q’ pool hall in Pueblo Colorado in between matches in this tough action pool tournament. It’s almost4PM and I have been here since 10:00 AM this morning. I was lucky and drewabye in the first round and then won my first match5ရန် 1afew minutes ago. There is definitely some tough action in this tourney. We have several players from Colorado Springs and Denver and then of course there is Dr. Cue (Tom Rossman) from out of state. This is the […]
Most people who camp frequently know they needaweather resistant floor in their tents. အများအားဖြင့်, this knowledge is learned the hard way through experience. What are tent footprints and how to select the right one? One might assume thatatent they just purchased comes withabuilt-in floor. တကယ်တော့, many tents do not come withatent floor. For those that do, they may not haveaweather resistant floor. That’s where tent footprints come into the picture. Not only doesatent footprint pro […]
Golf startedalittle more than 500 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. It may have gone back as far as the roman days. The golf ball wasaleather pouch stuffed with feathers. Is it possible the kids back then started the game of golf by taking the feathers of their father’s arrows and stuffing their pouch, and usedaclub instead ofabow to get the curvilinear motion ofagame they really wanted to play? The Scottish Shepherds started playing golf back in Scotland, by hittingaleather ball stuffed with feather […]
Professional sports for women is an area that’s seen tremendous growth in recent years. ဂေါက်ကွင်းကမတူပါဘူး. The stage is set for even more opportunity for women in the golf arena. More and more women are proving their ability to compete on the same field as men. From the more experienced players like Annika Sorenstam, to the very young Michelle Wie, the strength and stamina of women are abundantly displayed. The struggle has been long for women to gain the respect and opportunities previ […]
There are some basics in blackjack. Splitting aces and eights only makes senses sinceahand equaling2ဒါမှမဟုတ် 12 compared to having two hands of 11 isano brainer. Even though you only receive one card to your ace, the chances of getting 21 orarelatively decent hand are good. Splitting eights all the time isabit riskier. Some blackjack studs say not to split eights if the dealer is showinganine oraten. ကျွန်တော့်အတွက်, it depends on how the cards are flowing that day whether I will split the eights […]
Paintball is the fastest growing sports worldwide and every day thousands of new players join this exciting sport. Many might think it is an extreme sport ‘ ကောင်းပြီ, it is but there several differences to ‘normal’ extreme sports. One of the major differences to regular extreme sports is that you hardly can surviveagame on your own. ဟုတ်တယ်, you need to cooperate and communicate with your team-mates. Have you ever been to one of these career assessment centres held by big companies w […]
It’s often said that there’s something special about listening to the hometown broadcast ofabaseball game on the radio. အခု, no matter where they are, baseball fans can follow the fortunes of their favorite team. Thanks to satellite radio, it’s possible to listen to all the live-action coverage of the team of your choice, even if you are on the road or have moved far away from your hometown. 2006 marks the second year of an 11-year broadcast and marketing agreement between Ma […]
Geoff Ogilvy madeabig splash in the world of golf this year by winning the prestigious US Open. ရုတ်တရက်, he was on everyone’s lips and they were all asking the same questions: Who is Geoff Ogilvy and where did he come from? Ogilvy is an Australian golfer who currently lives in Scottsdale, Arizona. This may come asasurprise to many but the US Open was actually Ogilvy’s third championship on the PGA Tour. He previously won the 2005 Chrysler Classic of Tucson and the 2006 WGC-Accen […]
Scuba diving is an advanced form of diving. Fundamentally, it is the same as simple under water diving but aided withaself-contained underwater breathing apparatus. Scuba diving requires the use of an air tank that allows one to breathe underwater. A number of scuba divers take pleasure in diving in lakes, whileafew prefer to dive in river waters. သို့သော်, the most exciting version of scuba diving involves diving into the unknown depths of ocean waters. Scuba diving isadaring sport usually […]
Most golfers pull or driveagolf cart to help them travel comfortably from hole to hole. But before there were golf carts, there were golf caddies to carry the clubs, rake sand traps and offer the occasional bit of quiet advice. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, it seems you can only spot caddies on the most prestigious courses, or on the big screen. Caddies areadying breed, but the history of caddies isacolourful one. Perhaps the most famous caddy of them all, William Gunn, a.k.a. Caddie Willie, is said to have […]
Getting involved in online poker games isawonderful way of enabling you to playagreat card game in the privacy of your own home. There are so many tremendous advantages to playing these poker games via the internet. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, it is convenient in that you do not have to drivealong distance or even short distance toagaming facility as you will most likely only need to walk into the other room where your computer is set up. A second reason why online poker games areagreat way to enjoy […]
Fitness training is one of the keys to help you improve your golf swing. In addition fitness training can help you get in shape and feel better both on and off the golf course. Performing exercises to build muscular strength can add power to your golf swing, boost your endurance, and loosen up your muscles and joints to help you avoid injuries both on and off the golf course. Most golfers will do the actual fitness training inagym using either free weights, machines oracombination of both. ဇ […]
If you are looking forabargain onapool table, you can find one fairly easily. Your local newspapers will often have classified listings for pool tables, also Check listings of liquidation or closeout sales, auctions of items from bankrupted businesses or auctions of property seized from storage units where the rent has not been paid, နောက် ... ပြီးတော့. Have some patience and keep your eyes open and you might be able to get here you might be able to acquireanearly new billiard table forafraction […]
I titled this article Pool Billiards league play so it will be easy for someone who is searching either word to find this article. I currently play onaBCA team once per week on Thursday nights and two APA teams, one on Tuesday and the other on Fridays. The APA league is handicapped and we use the APA equalizer system. This comes into affect on Tuesday nights because it isaregular APA league. This league is 8 ball and my skill level isa7. This is as high as it gets in 8 ဘောလုံး. I playedaguy […]
When it comes to buying outdoor gear online you could spend hours trying to find the best price on the right item. ကံကောင်းထောက်မစွာ, it is getting easier. Companies like, Altrec, Moosejaw, Campsaver, Rockcreek and Proboardshop have made finding the right piece of equipment much easier. In addition toafull line of men and women’s outdoor clothing these sites offeravast selection of hard to find accessory items. Items like GPS navigation systems, first aid and safety equipment stoves and lant […]
Core training for golfers isamust for developing maximum power and distance. As in all athletics, the core is your engine. Everything comes from the core! The modern golf swing is definitelya‘core-focused’ လှုပ်ရှားမှု; unlike the older swing technique of lower body action dominant. You probably have heard the term core training for golfers, but do you know what it means and how to implement it into your golf performance routine? Your core is the middle section of your body’spe […]
လှေစီးခြင်းနှင့်အမဲလိုက်ခြင်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုဖြစ်သည်. နောက်ဆောင်းပါးတွင်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာပြီးဘေးကင်းရေးနှင့်ပတ်သက်သောအန္တရာယ်အချို့ကိုဆွေးနွေးပါမည်. Boating Boating ဟူသောဝေါဟာရသည်များသောအားဖြင့်အပျော်တမ်းယာဉ်ကိုအပန်းဖြေရန်အသုံးပြုခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်. ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ရေကူးခြင်းတို့သည်အခြားအားကစားများစွာနှင့်အတူလှေစီးရန်လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလှေသင်္ဘောများကိုရှာတွေ့နိုင်သည်. Boating Safety လူအများစုကရေပေါ်မှာလှေပေါ်တက်တဲ့အခါသူတို့စိတ်ထဲမှာနောက်ဆုံးအရာကအရေးပေါ်ပြင်ဆင်မှုပါ. ဤသည်မှာအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလူများစွာတို့၏အသက်ကိုဆုံးရှုံးစေသည့်အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်. အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းသည်သင်စက်လှေထွက်ရန်သွားလျှင်အလွန်အရေးကြီးသည်. လှေပေါ်မှာအဖြစ်များတဲ့လှေတွေပေါ်မှာရေထဲကျနေသူတစ်ယောက်ပါရှိပါတယ်, လှေပြိုကွဲ, လှေယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် capsizing. သင့်လျော်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုအကြံပြုရုံသာမကနေရာအများစုတွင်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်. ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပစ္စည်းကိရိယာများတွင်အသက်ကယ်ဗော်ယာများပါ ၀ င်သည်, အသက်ကယ်အင်္ကျီများနှင့်လှေကားများ. mostရိယာအများစုတွင် ဦး ချိုနှင့်အာမခံကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်. အထူးသဖြင့်အအေးမိရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ရေအေးတွင်လှေလှော်စဉ်တွင် Survival ဝတ်စုံများကိုအထူးအကြံပြုသည်. လုံခြုံစိတ်ချရသောခရီးကိုသေချာစေရန်သင်၏လှေကိုသင့်တော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. သင့်တော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိပါကသင်၏လှေသည်ပြိုကွဲရန်အန္တရာယ်များစွာရှိပြီးသင်ကိုယ်တိုင်အပါအ ၀ င်လူအားလုံး၏ဘ ၀ ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်. အမဲလိုက်ခြင်းအမဲလိုက်ခြင်းသည်သတ်ဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်သတ်ရန်ကြိုးစားစဉ်တိရိစ္ဆာန်အချို့ကိုလိုက်စားခြင်း၏အလေ့အကျင့်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်. အမဲလိုက်ခြင်းကများစွာသောလူကိုပြန်စ, နှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်အလွန်ဂုဏျ pastime ဖြစ်ပါတယ်. အမဲလိုက်ခြင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအသုံးမပြုသည့်အခါသေနတ်အားလုံးကိုချပါ. သင်သေနတ်တင်ထားသည်ကိုသင်သိပေမည်, သင့်ပတ်လည်ရှိလူများမပြုရ. ခြံစည်းရိုးကိုကျော်ပြီးဘယ်တော့မှမခုန်ပါနှင့်၊ တင်ထားသောသေနတ်နှင့်သင်၏သစ်ပင်ရပ်သို့မတက်ပါနှင့်. ATV သို့မဟုတ်အခြားမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးတွင်ခရီးသွားစဉ်သေနတ်ကိုလည်းချပါ. သင်ပစ်မှတ်မတိုင်မီသင့်ပစ်မှတ်၏ရှေ့တွင်အဘယ်အရာရှိသည်ကိုသိရုံသာမကနောက်ကွယ်ရှိအရာများကိုလည်းသတိပြုရန်သေချာစေပါ. မုဆိုးများစွာသည်သူတို့မလွတ်နိုင်ဟုယူဆသောကြောင့်ဤအပိုင်းကိုစွန့်လွှတ်ကြသည်. ဒါကသို့သော်အမှုမဟုတ်ပါဘူး. ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အရေးအကြီးဆုံးသောလုံခြုံစိတ်ချရသောအချက်မှာအချိန်တိုင်းတွင်သာမန်အသိဥာဏ်ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်. အမဲနေစဉ်, သင်၏စိတ်ခံစားမှုကိုသာမန်အသိစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးရန်အချိန်မရွေးခွင့်ပြုပါ. သင်နှင့်အတူသံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့်မြေပုံယူခြင်းသင်ရှုံးလျှင်ကူညီလိမ့်မည်. အကယ်၍ အမှောင်ထဲမှာသင်ပျောက်ဆုံးသွားရင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးတောင်မှကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုပါ. လက်နှိပ်ဓာတ်မီးသည်မြွေများနှင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောအခြားသတ္တဝါများကိုရှောင်ရှားရန်လည်းကူညီလိမ့်မည်. ဤအကြံပေးချက်များကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သင့်အားလုံခြုံစိတ်ချရသောပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်လှေလှော်ခြင်းသို့မဟုတ်အမဲလိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးကိုပေးလိမ့်မည်. လှေနှင့်အမဲလိုက်များအတွက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
Montana is known as one of the best places to camp. The land is full of wide open areas with plenty of wildlife and beautiful areas to explore. There are plenty of camping options to choose from. Salmon Camp isastate park that allows visitors to camp overnight. This isagreat facility for those who enjoy being outdoors but love the comforts ofahot shower as well. There are plenty of marked trails foraday of hiking. There are specified water areas for fishing and swimming, and boating docks. The most popular camping location in all of Montana is located in Fort Smith, called Bighorn Canyon. This area offers miles of open land to camp on in your tent, RV, or you can rentabeautiful cabin. There is plenty of wildlife to observe as well as some of the biggest fish swimming in the waters there. If you plan to camp with children consider Jellystone Park in Missoula, home of Yogi the bear himself! There is plenty of area for hiking, ငါးဖမ်းခြင်း, အမဲလိုက်, and exploring. There is alsoaghost town with mines onlyafew minutes away. There are also games, လက်မှုပညာများ, and activities for children of all ages to enjoy. Yellowstone Park isaNational Park that offers camping, မြင်းစီးခြင်း, wildlife observation, and beautiful scenery. You can choose to go hiking on the various trails by foot or rentahorse to ride for the day. Another wonderful National Park to visit in Montana is Gallatin. This National Park is located in the Western Park of Montana. Plenty of large wildlife roam the area here. You will love camping in the open spaces and listen to the different animals throughout your explorations. Montana is the place to be if you enjoy camping. There are so many different areas to choose from. You can pick one based on location, the terrain, the wildlife, or the camping accommodations. Regardless of where you choose to camp in Montana, I am sure you will haveagreat time relaxing in the great outdoors.5Places To Go Camping In Montana
တောရိုင်းတူရကီအမဲ: တစ် ဦး ရိုင်းငန်း Chase ရုံထက်ပို
တူရကီအမဲလိုက်ခြင်းသည်ယနေ့အပျော်တမ်းဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသောအမဲလိုက်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်. အအောင်မြင်ဆုံးသောကြက်ဆင်မုဆိုးများသည်ငှက်တစ်ကောင်ကိုရှာဖွေရန်နည်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြသည်. များစွာသောနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ကြက်ဆင်မုဆိုးတစ် ဦး စီသည်သူတို့၏နည်းလမ်းများအားကျိန်ဆိုလိမ့်မည်. မုဆိုးအများစုသဘောတူကြလိမ့်မည်ဟုသော်လည်းအမှန်တရားအချို့ရှိပါသည်. သူတို့ထဲကတချို့ဟာအလုံအလောက်သိသာဖြစ်ကြသည်, ကြိုက်တယ်, ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနေခြင်းကမုဆိုးများကိုသေနတ်ဖြင့်ပစ်။ အကာအကွယ်ပေးထားသည်. ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ရှားမှုဟာကြက်ဆင်မုဆိုးများ၏အမြင့်ဆုံးရန်သူဖြစ်၏. ဒီထက်အများကြီးပို, လေ့ကျင့်နေတဲ့ကြက်ဆင်မုဆိုးအဖြစ်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုစေသည်. နှင့်ကြက်ဆင်အမဲလိုက်ခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်မုဆိုးသတိပေးချက် hone ပါလိမ့်မယ်. မည်သည့်အားကစားလိုပဲ, တ ဦး တည်းကိုလိုက်နာရမယ်အချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်, သင်မှတ်မိဖို့လိုအပ်တဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဒီမှာရှိပါတယ်: သငျသညျကြက်ဆင်အမဲလိုက်ခွင့်နှင့်သေးငယ်တဲ့ဂိမ်းအမဲလိုက်လိုင်စင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် – ရိုင်းသောတူရကီအမဲလိုက်တဲ့အခါလိုအပ်သည်. နှစ်စဉ်ကြက်ဆင်ခွင့်တစ်ခုသာသင်ဝယ်နိုင်သည်. သင်သည်သင်၏ကန့်သတ်ဖြည့်ခဲ့ကြပါ, သင်နောက်ထပ်ကြက်ဆင်မုဆိုးကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင်မည်သည့်မီးလက်မောင်းသို့မဟုတ်လေးကိုပင်ဆောင်ခဲ့ဘူး. ရိုင်ဖယ်များနှင့်လက်သေနတ်များကိုအသုံးပြုခွင့်မပြုပါ. သင်၏လေးနှင့်မြားကိုသာ သုံး၍ သင်လိုက်ရှာနိုင်သည်, နံပါတ် (၈) ထက်မပိုသောသို့မဟုတ်အရွယ်အစားရှစ်ခုထက်မပိုသောသေနတ်များပါသောသေနတ်. ဤရွေ့ကားရိုင်းတူရကီဖမ်းရန်တစ်ခုတည်းသောလက်နက်များဖြစ်ကြသည်. သင်၏ခွင့်ပြုချက်သာပါသော tag ကိုဖြည့်ပြီးသင်ရိုက်သောကြက်ဆင်နှင့် တွဲ၍ ကပ်ရမည်. ကြက်ဆင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အသိုက်ကိုမနှောက်ယှက်ပါနှင့်. နွေ ဦး ကာလအတွင်းခွေးနှင့်အတူရှာဖွေခွင့်မပြု. သို့သော်သင်ကဆောင်း ဦး ရာသီအတွင်း၎င်းကိုလိုက်ရှာလိမ့်မည်. ပွင့်လင်းရာသီများတွင်တူရကီများကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်မည်သည့်ပြင်းထန်သောကိရိယာကိုမျှမသုံးရ. အောင်မြင်သောနှင့်လုံခြုံသောကြက်ဆင်အမဲလိုက်ရာသီအတွက်အကြံပြုချက်များလည်းဤတွင်ပါ: သင်သည်သင်၏ဂီယာနှင့်သင်၏ကြက်ဆင်ကိုအခြားလူနှင့်ထားခဲ့ပါက, အောက်ပါအချက်အလက်များကိုအရေးပေါ်ကိစ္စအတွက်ထားခဲ့ပါ. 1. မင်းနာမည် 2. သင့်ဖုန်းနံပါတ် 3. သင်၏လိပ်စာ 4. သင်၏လိုင်စင်အမဲလိုက်နံပါတ် 5. သင့်ကြက်ဆင်ခွင့်ပြုနံပါတ် 6. အဆိုပါပါတီ၏နာမကိုအမှီ 7. အဆိုပါ 3rd ပါတီရဲ့လိပ်စာ 8. လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင့်ရဲ့တိရိစ္ဆာန်ဆရာလည်းအမည် 9. သူသို့မဟုတ်သူမ၏အဆက်အသွယ်နံပါတ်မကြာသေးမီရိုင်းကြက်ဆင်လုပ်ငန်း၏လက္ခဏာများကိုရှာဖွေပါ. သင့်လျော်သောခေါ်ဆိုမှုတည်နေရာကိုရှာပါ. ဤဆိုင်းဘုတ်များတွင်ပုဒ်နှင့်အညစ်အကြေးများပါရှိသည်. ကောက်ပဲသီးနှံရိုင်းစိုင်းသောဒေသတွင်တည်ရှိသည်သောအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဒေတာကိုဆက်ကပ်. ငှက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလည်းဖော်ပြသည်. gobblers သည်, သူတို့က J-shaped ရှိသည်, ဆံပင်ကဲ့သို့သောရှည်လျားသောကြမ်းတမ်းသောအမွှေးများနှင့်ရင်သားကင်ဆာမှမုတ်ဆိတ်အဖြစ်လူသိများသည့်ဆံပင်ကဲ့သို့သောအမွေးများ. ပုံမှန်အားဖြင့်မုတ်ဆိတ်သည် ၃ လက်မမှ ၁၀ လက်မအထိရှိသည်. သူတို့ထဲကအများစုဟာခြေထောက်တွေကိုအောက်ခြေမှာစုပ်ကြတာ. မုတ်ဆိတ်နှင့်စွယ်အရှည်များသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာသည်. တချို့က hens လည်းမုတ်ဆိတ်ရှိသည် 10 သူတို့ရဲ့လူ ဦး ရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကဆံ့. ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့၏ ဦး ခေါင်းသည်မီးခိုးရောင် - အပြာရောင်ရှိသည်, ပန်းရောင်နှင့်အနီရောင်အရောင်နှင့်အတူ. သူတို့၏ရင်သားအမွေးအတောင်များသည်ကြက်မ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးမျက်လုံးစွဲနေသည့်အရောင်ကိုဖြူဖွေးနေသောအဖြူရောင်အစွန်အဖျားရှိသည်. တူရကီသည်ပြင်းထန်သောနားကြားခြင်းနှင့်အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်းများရှိသည်. သူတို့ကိုခေါ်နေစဉ်ရွေ့လျားနေရမည်. ဤအမဲလိုက်ဝါသနာပါသည့်အတွက်ပြောက်ကျားအဝတ်အစားများကိုလည်းအကြံပြုသည်. မုဆိုးများပင်သေနတ်ကိုင်စည်ကိုသူတို့၏တောက်ပသောသတ္တုများမှမတွေ့ရှိရန်ကာကွယ်ရန်သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ကြသည်. တောရိုင်းတူရကီအမဲ: တစ် ဦး ရိုင်းငန်း Chase ရုံထက်ပို
You can find good spots for fly fishing in most states, but some are more epic than others. Allow me to introduce you to heaven on earth for anglers. Fly Fishing Heaven In Montana Montana is an incredibly beautiful state. It is located on the Canadian border between Wyoming and the Dakotas. It is the fourth largest state with over 145,000 square miles. The central and eastern sections of the state are plains, while the west contains the northern Rocky Mountains. Major rivers include the Yellowstone, Madison, Missouri and Flathead. Montana also has the shortest river in the world, the Roe, ဘာလဲ 201 ပေအရှည်. Justabit of trivia for you to throw around on your trip! The Yellowstone isatributary of the Missouri River. It is an excellent fly fishing river. The longest undimmed river in the continental United States, the Yellowstone drains the Rocky Mountains in the park of the same name. The river offers excellent trout fishing up and down practically every area. Cutthroat and brown trout are plentiful and active. Rainbows are less so, but still common. The Yellowstone is mostlyano-kill river, so don’t plan on dinner. The Lamar, Soda Butte and Slough Creek tributaries are easily waded and not excessively challenging. Although it may get you in trouble with your mother, the Caddis Fly hatch on Mother’s day is legendary. When it comes to fly fishing in the states, no river is more legendary than the Madison. For years, nearly every Montana trip started and stopped withavisit to the Madison. In the early 90s, သို့သော်, the fish in the river were devastated by whirling disease. The disease was accidentally created in fish hatcheries in Europe and spread across the globe. The criminal element isaparasite that infects fish and causes neurological disease. The fish tend to swim in circles, thus giving the disease its name. ကံကောင်းထောက်မစွာ, the fish in the Madison have been on the rebound for the last five years or so. The last three years have seenamajor rebound, which means the legendary Madison should beahigh on your list. The Madison isaround rock bottom river and can be slippery. The current isn’t excessive and you can wade most of it without problem. Browns, Cutthroats, Rainbows and Graylings are the prominent fish. The area below Holter Dam is highly recommended by many, but you need to be an accomplished caster to haveagood time. Hatches start in April and run through the middle of September. The Salmon Fly hatch in late June is the best, but you really can’t go wrong. As the weather starts to warm up, it is time to start thinking about breaking out the rods and thinking about potential trips. Montana should be at the top of your list. Fly Fishing Heaven In Montana
သံမဏိအမဲလိုက်ဓါးများနှင့်အမဲလိုက်မုဆိုးများရရှိနိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာများ, နည်းဗျူဟာဓားများနှင့်အိတ်ဆောင်ဓားများသည်မုဆိုးတိုင်းတစ်ချိန်ချိန်တွင်လိုအပ်သောကိရိယာအမျိုးအစားဖြစ်သည်. သင်၏ဂိမ်းကိုတောင်ပေါ်မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ခုတ်ခြင်းကဲ့သို့သောစခန်းချအခြေခံများကိုဂရုစိုက်ရန်အချိန်ရောက်သောအခါ, ကကြံ့ခိုင်ရှိသည်ဖို့အရေးကြီးတယ်, သငျသညျအများအပြားအမဲရာသီအတွက်ကြာရှည်ဖို့အပေါ်မှီခိုနိုင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမဲလိုက်ဓါး. နည်းဗျူဟာဓားသို့မဟုတ်အိတ်ဆောင်ဓားသည်အမြဲတမ်းမှိုင်းနေလျှင်သို့မဟုတ်အလွယ်တကူပျော့ပျောင်းလျှင်၊ သင်၏အချိန်အမဲလိုက်ခြင်းကိုပျော်မွေ့နိုင်ပြီးအမှားကင်းသည့်အမဲလိုက်ရသောရာသီရောက်လိမ့်မည်. ထို့ကြောင့်သင့်အားအမြဲတမ်းသင့်လျော်သောဓါးသွားသေချာစေရန်အရေးကြီးသည်, နှင့်လက်ျာဓါးရွေးချယ်ဖို့. လူအတော်များများကဓါးတစ်ချောင်းထက်မကရှိသည်ကိုမသိကြပါ, တကယ်တမ်းကျတော့လူတစ်ယောက်ရွေးနိုင်တဲ့အဓိကဓါး ၃ ချောင်းရှိတယ်, သူတို့ရဲ့တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်. Drop Point Blade အမဲလိုက်ခြင်းဓါးများ Drop Point Blade သည်ယနေ့ဈေးကွက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းဗျူဟာဓါးဖြစ်သည်။. Drop Point သည်ဓါးကိုချွန်ထက်သောအထူရှိပြီးထူထဲ။ ပြုလုပ်သည်, ဘာမှမမှတက်သည်ရပ်နိုင်သောကြာရှည်ခံသံမဏိဓါး. Drop Point Blade ၏အစွန်းသည်ဤတွင်ဖော်ပြထားသောဓားသုံးမျိုးအနက်အများဆုံးသောအသုံးအဝင်တစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အထိုးသို့မဟုတ်ထောက်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်, ၎င်းသည်အသတ်ခံရပြီးနောက်ဂိမ်းကိုထိထိရောက်ရောက်အသားပေးရန်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်. Clip Point Blade အမဲလိုက်ခြင်းဓါးများ Clip Point Blade သည်အခြားလူကြိုက်များသောအမဲလိုက်သည့်ဓားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. clip point သည် drop point blade လောက်လူကြိုက်များခြင်းမရှိသော်လည်း, clip point blade သည်ပိုမိုပါးသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဓါးမှာပြားပြားဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်တစ် ဦး ပွိုင့်နှင့်အတူ. clip point blade သည်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, သို့သော် clip point blade သည်အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်မဆိုင်သောအခြားအသုံးပြုမှုများအတွက်လည်းကောင်းမွန်သည်, ကြိုးသို့မဟုတ်အကိုင်းအခက်များသို့မဟုတ်အခြားသဘောသဘာဝကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့. clip point blade သည်မုဆိုးများအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးဝင်သောဓားများဖြစ်သည်, နှင့်အထွက်အဲဒီမှာအမဲလိုက်ဓါးသွားအသုံးအများဆုံးနှင့်သယ်ဆောင်အမျိုးအစားများတစ်ခုဖြစ်သည်. Skinning Knife Skinning ဓါးများသည်လူကြိုက်များသောအမဲလိုက်သောဓားများဖြစ်သည်, သူတို့စျေးကွက်ရှိအခြားနည်းဗျူဟာဓါးများကဲ့သို့ဘက်စုံသုံးမဖြစ်ပေမယ့်. အရေခွံဓါးသည်ထိုအတွက်သာဖြစ်သည်, အသားမှဂိမ်းတစ်ခု၏အရေပြားကိုဖယ်ရှားခြင်း. အသားများကိုတတ်နိုင်သမျှကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက်အရေပြားသည်အချို့သောဓါးများဖြင့်ပြုလုပ်သည်. သင်ရှာလျှင်သင် Skinning လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသင်၏ဂိမ်းတွေအများကြီးရှုံးသည်, သင်ပိုမိုနည်းဗျူဟာဓါးများအပြင်အရေခွံဓါးဝယ်ယူရန်စဉ်းစားရန်လိုပေမည်. ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမဲလိုက်သည့်ဓားများထားရှိခြင်းသည်အမဲလိုက်ခြင်း၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်, သငျသညျကြီးမားတဲ့ဂိမ်းမုဆိုးရှိမရှိ, waterfowl မုဆိုးသို့မဟုတ်တံငါသည်. ရရှိနိုင်သည့် blade အမျိုးအစားများကိုသိရှိခြင်းဖြင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်သင်၏အသုံးပြုမှုအဆင့်ကိုမည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်. ဓားတစ်လက်သည်၎င်း၏လက်ကိုင်ပုံစံသို့မဟုတ်၎င်း၏စျေးနှုန်းထက်ပိုမိုကြောင်းသတိရပါ. အဆိုပါဓါး၏လက်မှုလက်နှင့်စတိုင်အမဲလိုက်ဓါးသည်သင်၏အမဲလိုက်စက်ကိရိယာများအတွက်အဖိုးတန်ဖြည့်စွက်စေမည့်အခြေခံအချက်များဖြစ်သည်. ~ ငါ Anton ပါ, 2007 နှင့်တံငါသည်များ
Skydiving အထောက်အပံ့သင်သိထားရန်လိုအပ်သည့်အရာများ SkyDiving Certificate ကိုသင်တက်ရောက်သည့်အချိန်တွင်သင်လိုအပ်သော skydiving supply များအားလုံးကိုငှားရမ်းနိုင်သည်။. သို့သော်သင်သည်အားကစားနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားပါကသင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်သင့်ကိုယ်သင်တပ်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်. သင်၏အခြေခံပစ္စည်းကိရိယာများကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်, မျက်မှန်, နှင့်သံခမောက်လုံး. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် altimeter နှင့်လက်အိတ်များကို ၀ ယ်လိုသည်. skydiving supply များအတွက်စျေးဝယ်သောအခါသင်တွေ့ရမည့်ပစ္စည်းအချို့ကိုရှင်းပြသည်: Altimeter ‘ ၎င်းသည်ဆင်းသက်သည့်byရိယာအထက်အမြင့်ကိုတိုင်းတာရန်အတွက် skydivers များအသုံးပြုသောကိရိယာဖြစ်သည်။. ကွားနိုငျ Altimeter ‘ ရေငုပ်သမားသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအမြင့် Canopy သို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်နှိုးစက်တစ်ခုဖြစ်လာသည် ‘ ၎င်းသည်လေထီး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လေအားခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီးနှေးကွေးစေနိုင်သောကြိုးနှင့်လိုင်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။. ရှေ့ပြေးစကားပြောခန်း ‘ ၎င်းသည်မြန်ဆန်သောအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်း (သို့) ဖြန့်ကျက်ခြင်းကိုစတင်ရန်အဓိကလမ်းဖွင့်ခြင်းနှင့် တွဲဖက်၍ အလုပ်လုပ်သောအသေးအဖွဲသေးသည်. ကြိုး ‘ ရေငုပ်သမားအားအငြင်းပွားမှုနှင့်ဆက်သွယ်သည့်အရာနှင့်အနေအထားတွင်ရှိသောရေငုပ်ခြင်းကိုတားဆီးထားခြင်း. အလိုအလျောက် Activation Device ‘ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန် (သို့) အလျင်တွင်အရံသိုလှောင်မှုကိုအလိုအလျောက်ဖြန့်ကျက်စေသော Electro-mechanical ကြံစည်မှု. ကွန်တိန်နာ ‘ ဤသည်ဖြန့်ကျက်သည်အထိမြည်တမ်းထားသည့်အိတ်ဖြစ်၏. သင်၏အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ သင်၏ခုန်မြန်နှုန်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မည့်အမျိုးမျိုးသောခုံများနှင့်အခြားကိရိယာများကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။. အဓိကမိုးရေပေးသွင်းသူများသည် Icarus တို့ပါဝင်သည်, Precision Aerodynamics နှင့် Aerodyne. ဓားများကဲ့သို့အခြားပစ္စည်းများကိုလည်းသင်သုံးနိုင်သည်, မြွေ, ဖျာနှင့် windsocks ဆွဲယူ. Skydiving အထောက်အပံ့များသည်အစပြုပစ္စည်းများမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများအထိဖြစ်သည်. ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုလေ့လာသောအခါသင်ကြုံတွေ့ရမည့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်. ထိုကဲ့သို့သောမသမာမှုများနှင့်ငြိမ်လိုင်းများကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည်သင်၏လေထီးအားထိန်းချုပ်ရန်နှင့်စီမံရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်. toggles ကိုလည်းသုံးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်ဆင်းသက်ခါနီးတွင်သင့်အမြန်နှုန်းနှေးကွေးစေမည့်လိုင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ယန္တရားများဖြစ်သည်။. မင်းရဲ့မျိုးရိုးကိုမင်းထိန်းနိုင်အောင်သူတို့ကချိုးဖျက်တာမျိုးလုပ်တယ်. Skydiving ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ
Beginners များအတွက် Whitetail သမင်အမဲ
Whitetail သမင်အမဲလိုက်ခြင်းသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစိတ်အားထက်သန်သူများနှင့်အတူကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးအမဲလိုက်သောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်. ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် whitetail သမင်မုဆိုးလုပ်ရန်မှာခက်ခဲသောအရာဖြစ်နိုင်ပြီးလျောက်ပတ်သောရလဒ်များနှင့်စတင်နိုင်ရန်ဤလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်အချို့လိုအပ်သည်။. အတွေ့အကြုံရှိမုဆိုးများသည်ရပ်ကွက်ထဲသို့သွားသည့်အခါအမဲလိုက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုစစ်ဆေးရန်အကြံပေးသည်, ခေါနောက်ဆုံးမှာထွက်သွားကြလိမ့်မည်သည့်အခါနောက်ပိုင်းမှာမ. သင့်ရဲ့နယ်ပယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ, အခွံထဲမှာဒါမှမဟုတ်သင်တစ် ဦး လေးကိုအသုံးပြုပါလျှင်ခွံ, သင်၏လေးသည်စနစ်တကျပြန်ဆွဲထုတ်နိုင်မနိုင်စစ်ဆေးပါ. ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကိစ္စများအများအပြားရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပေးဒါကြောင့်. အကယ်၍ သင်သည်အစားအသောက်မြေကွက်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ရာနေရာများတွင် whitetail သမင်များကိုအမဲလိုက်ရန်စီစဉ်နေပါက၎င်းကိုတစ်နေ့တာနှောင်းပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုသည်။. သမင်ဒရယ်များသည်အဖုံးလေးနှင့်တူသည်ကိုသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်ဤတိရိစ္ဆာန်များကိုသင်အသုံးပြုနေသည်ဟုသင်ယူဆသောအဖုံးမှတဆင့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရှင်းရန်ကြိုးစားသင့်သည်. whitetail သမင်များသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအလွယ်ကူဆုံးလမ်းကြောင်းများကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုနှစ်သက်သည်. သင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပြီးပြီဖြစ်သည်, အမဲလိုက်သည့်သစ်ပင်တစ်ပင်တွင်တည်ဆောက်ထားသောလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရှာပါ. သမင်ခေါ်ဆိုမှုများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏လက်ဖက်ရည်ခွက်မဟုတ်ပါ ( အဓိကအားဖြင့်မင်းကဒီသတ္တဝါတွေကိုကြောက်ဖို့ကြောက်တယ် ), သင်မရိုက်လိုသည့်သမင်ကိုတွေ့ပြီးမှသာအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုသည်. သင်အဲဒီလိုလုပ်ပြီးတာနဲ့, သင်ကသူတို့ကိုခြိမ်းခြောက်မပေးကြောင်းသတိပြုမိကြလိမ့်မည်နှင့်သင်သည်သူတို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုစောငျ့ရှောကျပါလိမ့်မယ်. အသင့်တော်ဆုံးခေါ်ဆိုမှုများကိုသေချာစွာအသုံးပြုပါ, မဟုတ်ရင်တိရိစ္ဆာန်များသံသယရှိပါလိမ့်မယ်. ဖြစ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိလျှင်လိုက်ရှာခြင်းဖြစ်သည်. အတွေ့အကြုံကအရေးကြီးတယ်, သင်သာတော၌ ထွက်၍ သာသူတို့နေထိုင်ရာနေရာများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိမ့်မည်, အစာစားခြင်းအလေ့အထများနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏အားသာချက်တွင်သင်အသုံးပြုမည့်အခြားစရိုက်လက္ခဏာများဖြစ်သည်. သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်များကိုလိုက်နာရန်နှင့်နောက်တစ်ခေါက်တွင်အမဲလိုက်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်, မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့, သူတို့ပြောသောအရာကိုသင်တို့သိကြ၏: အလေ့အကျင့်သည်စုံလင်စေသည်။ ဤဖော်ပြချက်သည် whitetail သမင်သာမကအခြားတိရိစ္ဆာန်များကိုပါအမဲလိုက်ခြင်းအတွက်လုံးဝသက်ဆိုင်သည်. သငျသညျသစ်တစ်ခုinရိယာ၌အမဲလိုက်ရန်ရောက်လာသောအခါ, နေ့တိုင်းရပ်ကွက်သစ်တစ်ခုတွင်အချိန်တိုအတွင်းအမဲလိုက်ခြင်းသည်ဤသည်သမင်လှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်းအကြောင်းလေ့လာရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းဖြစ်သောကြောင့်. သင်မင်တစ်ကောင်ကိုတွေ့ပြီးရိုက်လျှင်၎င်းသည်သင်ရိုက်ကူးသည့်နေရာမှအလွန်တိုသောအကွာအဝေးကိုခုန်ပါ, နောက်ပြန်ရပ်။ နောက်ဆုံးအသက်ရှုရန်အချိန်ပေးရန်အကြံပြုလိုသည်, အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့တာနှောင်းပိုင်းတွင်ရိုက်ကူးပါကနေ့ချင်းညချင်းစောင့်ရန်အကြံပြုသည်. သင်တစ် ဦး လေးကိုနှင့်အတူ whitetail သမင်အမဲလိုက်ရန်စီစဉ်ထားပါ, အတွေ့အကြုံရှိမုဆိုးများသည်သစ်ပင်တစ်ပင်မှပြုလုပ်ရန်အကြံပြုသည်၊ ၎င်းသည်မြေပြင်မှအမဲလိုက်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုထိရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. နောက်ထပ်အကြံဥာဏ်, pin တစ်ခုတည်းကိုသာသုံးပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကြီးမားသောထွက်သွားသည့်အခါတိကျစွာအသုံးပြုရန်သတိရရန်ကြိုးစားခြင်းထက် whitetail သမင်ကိုမြင့်မားစွာသို့မဟုတ်နိမ့်ကျစွာထားရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်. ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များသည်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဤတိရိစ္ဆာန်များကိုလိုက်ရှာရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံးကြိုးပမ်းမှုသည်အနည်းဆုံးသင့်လျော်သောရလဒ်များရရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်. သတိရပါ; အခွင့်အရေးရတိုင်းလေ့ကျင့်ပါ. Beginners များအတွက် Whitetail သမင်အမဲ
ဝေါဟာရ: သမိုင်းကြောင်းအ, Kung Fu ဟူသောဝေါဟာရကိုရှေးဟောင်းကျမ်းများတွင်အမှန်တကယ်ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ. ၎င်းကိုပြင်သစ်လူမျိုး Jean Joseph Marie Amiot မှပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့သည်, ၁၈ ရာစုတွင်နေထိုင်သောသာသနာပြုတစ် ဦး, တရုတ်ကိုယ်ခံပညာကိုရည်ညွှန်းသည်. Kung Fu ကို Gongfu လို့လည်းခေါ်တယ်, Wushu, သို့မဟုတ် Kuoshu, နှင့်မူလမဆိုကျွမ်းကျင်မှုအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်, နှင့်ကိုယ်ခံပညာမှသီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး. အကျဉ်းချုပ်သမိုင်း: အလေ့အကျင့်, ဒphilosophန, ကွန်ဖူးအယူအဆကို Zhuang Zi ကဲ့သို့ရှေးဟောင်းတရုတ်စာသားများသို့ပြန်ဆိုနိုင်သည်, Dao De Jing, နှင့် Sun Zi Bing Fa (Sun Zi မှရေးသားသောစစ်ပွဲ၏အနုပညာ), အားလုံးအကြားရေးထားလျက်ရှိ၏ 1111-255 ဘီစီ. ဤရွေ့ကားကျမ်းအလေ့အကျင့်နှင့်ဆက်စပ်သောကျမ်းပိုဒ်များပါရှိသည်, ဝါဒဖြန်, နှင့်တရုတ်ကိုယ်ခံပညာ၏အခြေခံမူ, သို့မဟုတ်ကူဖူကိုယနေ့လူသိများသည်. ကူဖူ၏ပထမဆုံးရေးသားထားသောသမိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောသီအိုရီတစ်ခုကအဝါရောင်Emကရာဇ်ကဖော်ပြသည်, သူကနေနန်းစံ 2698 ဘီစီ, တရုတ်ကိုယ်ခံပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးကျမ်းကိုရေးသားခဲ့သည်. အခြားသူများကခေတ်သစ် Tai Chi ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဆင်တူသည့်အနုပညာပုံစံကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့်အတွက် Taoist ဘုန်းတော်ကြီးများအားဂုဏ်တင်ကြသည် 500 ဘီစီ. ထိုအခါ၌ 39-92 အေဒီ, ပန်ကူပါဝင်သည် “လက်တိုက်ပွဲ၏ခြောက်အခန်းကြီး” ဟန်မင်းဆက်သမိုင်းအပေါ်သူ၏ဟောပြောချက်၌တည်၏ (ဟန် Shu). ကိုယ်ခံပညာ၏ကျော်ကြားမှုတိုးတက်အဖြစ်, Hua Tuo အမည်ရှိဆရာဝန်တစ် ဦး သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်စာချုပ်ကိုလည်းရေးသားခဲ့သည်, ငါးယောက်ကစား” in 220 အေဒီ. ကွန်ဖူသည် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းမှစတင်ကာအနောက်တိုင်းတွင်အသုံးများသောစကားလုံးဖြစ်လာသည်, ကိုယ်ခံပညာရုပ်ရှင်များနှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းများဖြင့်လူကြိုက်များသည်. ယနေ့အနောက်နိုင်ငံများသည်ဂျက်ကီချန်းနှင့်ဂျက်လီကဲ့သို့သောသရုပ်ဆောင် / သရုပ်ဆောင်များသရုပ်ဆောင်ထားသောကိုယ်ခံပညာရုပ်ရှင်များကိုသရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အလွန်များပြားလာသည်။. အခြေခံနိယာမများ: Kung Fu ၏အယူအဆသည်အခြေခံသဘောတရား (Motivation) သုံးခုနှင့်သက်ဆိုင်သည်, မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းနှင့်အချိန်. ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရ, Kung Fu ကိုလေ့လာခြင်း၏တွန်းအားမှာလှုံ့ဆော်မှုမဟုတ်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်, သောစိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုသင်ယူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွင်းတဏှာထဲကနေလာသင့်ပါတယ်. ဤနေရာတွင်လှုံ့ဆော်မှုသည်အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်သည်. သင်ယူသူအတွက်ပြင်ပသို့မဟုတ်လောကအကျိုးအမြတ်မရှိပါ, တစ်ခုတည်းသောဆုမှာအသိပညာဖြစ်သည်, ကျွမ်းကျင်မှု, အစွမ်းသတ္တိ၊. ကောင်းဖူ၌တည်ရှိသည်, စည်းကမ်းလှုံ့ဆျောမှုမှဖြည့်စွတ်သည်. ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုသည်လုပ်ရပ်နှင့်လုပ်ရပ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်. သင်ယူသူသည်သူလှုံ့ဆော်ခံရသည့်အရာကိုကြိုးစားအားထုတ်ရမည်, နှင့် Self- စည်းကမ်းသူ့ကိုစတင်ရန်ကူညီပေးသည်နှင့်ထိုရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်သူ့ကိုလမ်းပြ. ထို့ကြောင့်, စည်းကမ်းမရှိဘဲ, လှုံ့ဆျောမှုစိတ်ကိုတစ် ဦး နိုးပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်. အချိန်ကာလသည်ကိုယ်ခံပညာ၌စုံလင်ရန်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်. ပြီးတာနဲ့လှုံ့ဆျောမှုနှင့် Self- စည်းကမ်းအတွက်ထားကြပြီ, သင်ယူသူသည်စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အချိန်များစွာပေးရသည်. အမှန်တကယ်မှုတ်သွင်းခံသင်ယူသူသည်အချိန်ဖြုန်းရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ, အချည်းနှီးသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ပျင်းရိနေပါ. သူ / သူမပြုလုပ်သမျှသည်တကယ့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းလိုက်နာသင့်သည်. မူကွဲနှင့်စတိုင်များ: အချိန်ကျမ်းပိုဒ်နှင့်အတူ, မြောက်မြားစွာမူကွဲနှင့်စတိုင်များကိုယ်ခံပညာ၌ထလာကြပြီ, သို့မဟုတ်ကူဖူ. လူကြိုက်အများဆုံးအချို့မှာကရာတေးပါဝင်သည်, Escrima, Wing Chun, Jujitsu, ဂျူဒို, Tae Kwon Do, Shaolin, White Crane, T'ai Chi Ch'uan, နှင့် Bagua Zhang က. ကွန်ဖူး: သမိုင်းနှင့်အခြေခံနိယာမများ
Marvin Harrison 1996 မူကြမ်းနေ့ရွေး
Marvin Harrison was born on August 25, 1972 in Philadelphia, Pennsylvania ပြည်နယ်. At6feet tall and weighing 185 pounds Harrison is far from the biggest and strongest wide receiver in the NFL. ဒါပေမယ့်ခံရကြောင်းနှင့်အတူ, he has always been able to doalot with what he has. For this reason many people feel that Harrison is one of the best wide receivers of today, and may very well end up being the best of all time. Afterasuccessful career at Roman Catholic High School in Philadelphia, Harrison decided to take this game to Syracuse University. During his time at Syracuse he set numerous records, and madeaname for himself across the college football world. Thanks to his great play on the field and high quality character off of it, NFL scouts began to take notice of him early on. With the 19th pick of the 1996 NFL Draft the Indianapolis Colts picked Harrison. သော်လည်း 18 other teams passed him by, this does not stop Harrison from performing at his peak from the moment that he set foot on an NFL field. In his first season with the Colts Harrison took the league by storm. He finished the 1996 season with 64 များအတွက် p ည့်ခံ 836 ကိုက်. He also added eight touchdowns during this season. Ever since then Harrison has been putting up equally impressive numbers year in and year out. Perhaps his best season ever was in 2002 when he pulled in 143 ထက်ပိုမိုများအတွက်ဘောလုံး 1,700 ကိုက်. Although Marvin Harrison has compiled gaudy individual statistics, he is also known as one of the best team players in the NFL as well. This is evident by the way that he helped to lead the Colts toawin in the Super Bowl at the end of the 2006 ရာသီ. Withafew more years left in the tank it is safe to say that Harrison will finish his career ranked at the top of most statistical categories for wide receivers. Marvin Harrison 1996 မူကြမ်းနေ့ရွေး
ဂေါက်သီးကလပ်အသင်းများ, ဂေါက်သီးကစားနည်းတိုးတက်လာသည်, ဂေါက်ကလပ်နည်းပညာ, ဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်ရေး, ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်း, ဂေါက်သီးစွမ်းဆောင်ရည်အပိုဒ်ခန္ဓာကိုယ်: နောက်ဆုံးပေါ်ဂေါက်ကလပ်များသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကထက် ပို၍ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြစ်သည်။? ဂေါက်သီးကလပ်အသစ်နှင့်သင်၏ဂိမ်းကိုတိုးတက်ရန်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူပုံရသည်။? ခေတ်သစ်ဂေါက်ကလပ်များသည်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးပိုကောင်းသောချိုသောအစက်များရှိသည်။? သူတို့ကသင်ပိုမိုတသမတ်တည်းရိုက်ချက်များ hit ကူညီဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါတယ်, အမှားများကိုပိုမိုခွင့်ပြုနေစဉ်. အဟောင်းဓါးစတိုင် (နောက်ကျောအဘယ်သူမျှမလိုင်နှင့်အတူအစိုင်အခဲကလပ် ဦး ခေါင်း) ဂေါက်ကလပ်များသည်အမှားအယွင်းမရှိခဲ့ပါ. သင့်တွင်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုရှိသည်, theုံဂေါက်သီးဘောလုံးကိုထိမှန်သို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ရိုက်ချက်အတွက်အခြေချ. သင်ဝယ်ယူထားသောကလပ်အသစ်တိုင်းသည်သင်၏ရမှတ်ကိုလျှော့ချရန်အကူအညီဖြစ်စေပါသလား?? ငါတို့ရှိသမျှသည်ကရိုးရှင်းသောခဲ့ကြသည်အလိုရှိ၏. အသစ်စက်စက်တီထွင်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်း, ပိုကောင်းတဲ့ဂေါက်ကလပ်ကသင့်ကိုမှားယွင်းတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်တယ်. ရှင်းပြရန်: ယခုတွင်ရှိသောအပျော်တမ်းကစားသမားအများစုသည်ဂေါက်သီးကလပ်အသင်းအား၎င်းတို့၏အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။? ဒီသဘောထားကမင်းကိုအရမ်းစိတ်ပျက်စေပြီးသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလည်းဖြုတ်ပစ်ပေးနိုင်တယ်။?? အာရုံစိုက်သင့်ရဲ့ဂိမ်းတိုးတက်အောင်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်အခါ, စဉ်းစားရန်များစွာသောအခြားရှုထောင့်ရှိပါတယ်. သေချာတာပေါ့, ကောင်းစွာတပ်ဆင်ကလပ်ကောင်းတစ်ခု set ကိုရှိခြင်း, နှင့်ပိုကောင်းသောလုပ်ဆောင်သောဂေါက်သီးဘောလုံးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးဖြစ်ပါတယ်. မည်သည့်အားကစားတွင်မဆိုအောင်မြင်စွာကစားရန်အဓိကသော့ချက်မှာခွန်အားပါဝင်သောပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်သည်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, နှင့်မျှတသောလေ့ကျင့်ခန်း, အဖြစ်တသမတ်တည်းအလေ့အကျင့်. ဂေါက်ကွင်းကမတူပါဘူး. ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသောကြွက်သားများပေါ်တွင်တောင်းဆိုမှုများမြင့်မားသည်. ပုံမှန်ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းတွင်နောက်ကျောနှင့်အခြားအဓိကကြွက်သားများသည်အဓိကအရေးပါသည်။? သင့်ရဲ့အဓိကကြွက်သားအလုံအလောက်ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်လျှင်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအင်အားကိုလွှဲပြောင်းရန်အတွက်ချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်. ဤသည်တသမတ်တည်းဂေါက်သီးကစားရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်. ပုံမှန်အားဖြင့်အနည်းဆုံးအားစိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဂိမ်းကိုတိုးတက်စေရန်များစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။? ကြွက်သားများလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်, သင်သည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုမြင်လိမ့်မယ်။? အဆိုပါကလပ်အကောင်းဆုံးခြုံငုံရလဒ်များကိုများအတွက်ကူညီနိုင်နေစဉ်, သင့်ရဲ့ကလပ်အသစ်ကနေအများဆုံးရရှိနိုင်စွမ်းရဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေ. ဂေါက်ကလပ်၏နည်းပညာအသစ်သည်သင်၏ရမှတ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သလား?
အွန်လိုင်းပေါ်မှာဖဲချပ်ကစားတာဟာပျော်စရာကောင်းပြီးရံဖန်ရံခါမှာပဲကစားရတာအရမ်းပျော်တယ်. ဒါပေမယ့်, ကစားသမားများစွာသည်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်ကစားခြင်းသည်အွန်လိုင်းကစားခြင်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်ဟုခံစားရပုံရသည်. ကောင်းပြီ, အဲဒါမဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး. ဒီမှာပါ9အွန်လိုင်းကစားခြင်းမှတိုက်ရိုက်ဖဲချပ်ပြိုင်ပွဲတွင်ကစားခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုမည်သို့သက်သာစေနိုင်ကြောင်းရွှေအကြံဥာဏ်များ. 1) အကယ်၍ သင်သည်နေ့စဉ်ဘဝတွင်ဖိအားပေးမှုကိုရင်ဆိုင်ရန်အခက်အခဲရှိပါက, နိုးနိုးကြားကြားရှိသောမျက်လုံးများနှင့်ကစားစရာများကြောင့်ကစားခြင်းသည်သင့်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမထင်ပါနှင့်. သင်အလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးမှုခံရလျှင်, သင်၏ငွေကိုသိမ်းဆည်းပြီးပြိုင်ပွဲတွင်လုံးဝမပါ ၀ င်ရန်သင်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ တိုက်ရိုက်ဖဲချပ်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြောသည့်အခါ၎င်းသည် ပို၍ အရေးကြီးသည်. 2) သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးခေတ်မမှီသောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပါ. ဒါကဖက်ရှင်ပြပွဲမဟုတ်ပါဘူး: ဒါကဖဲချပ်ပေါ့. ထို့ကြောင့်, သင့်ကိုသက်သောင့်သက်သာရှိစေရန်ကူညီပေးမည့်ထိုအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ပါ. ငါတင်းကျပ်စွာဂျင်းဘောင်းဘီကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့အားလုံးပတ်ပတ်လည်မှတဆင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုငါသိ၏, သူမမသက်မသာ fidgeting ထားရှိမည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သူမအဆင်မပြေစွာဝတ်စားဆင်ယင်ခဲ့သောကြောင့်သူသည်ပထမဆုံးအရှုံးသမားဖြစ်ခဲ့သည်. 3) ရေသာသောက်ပါကအနည်းငယ်သာသောက်ပါကရေငတ်မခံစားရသည့်အပြင်အိမ်သာသို့သွားရန်လည်းမရ. နှစ် ဦး စလုံးခံစားချက်နှစ်ခုစလုံးသည်လက်အလယ်၌ဖဲချပ်ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက်ဆိုးရွားသည်. 4) အရက်မသောက်ပါနှင့်သို့မဟုတ်သကြားအချိုရည်များကိုမသောက်ပါနှင့်. အရက်ကသင့်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုလျော့ကျစေပြီးချိုသောအချိုရည်များကမကောင်းမွန်သောစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်; သငျသညျတိုက်ရိုက်ဂိမ်းထဲမှာကစားသည့်အခါနှစ် ဦး စလုံးသငျသညျဆန့်ကျင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်. 5) ကုန်သည်ဘေးတွင်ထိုင်။ မထိုင်ပါနှင့်. ဖဲချပ်ပြိုင်ပွဲအများစုသည်သင့်အားအစောပိုင်းအဆင့်များ၌ရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်. ဖဲဝေသူတစ်ယောက်ချင်းစီကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ကုန်သည်၏ရှေ့တွင်ထိုင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. 6) ကစားနေစဉ်ရာထူးများကိုမပြောင်းရန်ကြိုးစားပါ. သင်အမှန်တကယ်မသက်မသာခံစားရရန်စတင်လျှင်, လက်ပြီးတဲ့အခါသင့်အနေအထားကိုပြောင်းပါ. မဖွင့်သောအခြေအနေမျိုးတွင်ကစားနေစဉ်သင်ပြောင်းရွှေ့သင့်သည်. 7) အနားယူချိန်တွင်အိမ်သာသို့သွားပါ၊ စကားမပြောပါနှင့်. အခြားကစားသမားများနှင့်စကားနည်းနည်းဖလှယ်ခြင်းထက်သင်၏အူလမ်းကြောင်းကိုလျှော့ချခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. 8) အခြားသူများမည်သို့လုပ်ဆောင်နေကြသည်ကိုသတိပြုပါ. ရှုံးနိမ့်မည့်သူများသည်၎င်းတို့တွင်အားကြီးသောလက်များရှိမှသာကစားရန်ရွေးချယ်လိမ့်မည်; ကြီးမားသော stack နှင့်အတူသူများသည်ကအန္တာရာယ်ပိုမိုဆန္ဒရှိလိမ့်မည်. 9) မလိုအပ်သောဆုံးရှုံးမှုများကိုကယ်တင်ရန်သင် ၀ င်ခဲ့သောအထူးပြိုင်ပွဲ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလေ့လာပါ. တိုက်ရိုက်ဖဲချပ်ပြိုင်ကစားခြင်းသည်လူတို့နှင့်ဆန့်ကျင်ပြီးလူများကိုကောင်းစွာဖတ်နိုင်လျှင်ဖြစ်သည်, သင်တစ် ဦး ပြိုင်ပွဲများတွင်ကစားသောအခါသင်တစ် ဦး အားသာချက်ရပါလိမ့်မယ်. သို့သော်သင်၏ပြိုင်ဘက်များကိုမခန့်မှန်းပါနှင့်. ဖဲချပ်ဝေချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ချမှုများမှာလောင်းကစားသမားအများစုသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောကစားသမားများနှင့်လဲကျသည်. ဒီတော့, ဂိမ်းလေ့လာပါ (http ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအကြံဥာဏ်များနှင့်အခြားအရာများကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်://www.gambling-portal.com နှင့်အခြားသူများ) , အမြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာတွေးတောပါ.9တိုက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲများ၏ချိုသောလျှို့ဝှက်ချက်များ
အစွန်းရောက်အားကစားတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကိုခံစားရရန်နည်းတစ်နည်းမှာ skydive ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်. Skydiving သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အလုံခြုံဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်, မြဲမြံသောကောလာဟလများနှင့်အားကစားကိုယ်နှိုက်အကြောင်းကြောက်ရွံ့မှုများရှိနေသော်လည်း. skydive ဖို့သင်ယူနိုင်ရန်အတွက်, ကသင့်လျော်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်. အကယ်၍ သင်သည် skydive ကိုလေ့လာလိုပါကအားကစားနှင့် ပတ်သက်၍ သင်လုပ်နိုင်သမျှအချက်အလက်အားလုံးကိုဖတ်ရန်ဖြစ်သည်. Skydive ကိုလေ့လာရန်နောက်ထပ်လုပ်ရမည့်အရာမှာအသိအမှတ်ပြုသင်တန်းပို့ချခံထားသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤသည်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့ web သို့မဟုတ်သင်၏ဒေသခံအဝါရောင်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်အနီးအနားရှိမြို့စီးပွားရေးစီးပွားရေးစာမျက်နှာများမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်. ယူနိုက်တက်စတိတ်လေထီးအသင်းကိုလည်းခေါ်နိုင်သည်, သင်သည်သင်၏ skydive ကိုလေ့လာရန်ကူညီရန်သင့်ဒေသရှိကုမ္ပဏီကောင်းတစ်ခုကိုအကြံပေးနိုင်သည်. မည်သည့်လေ့ကျင့်မှုမျိုးကိုသင်လုပ်လိုသည်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရမည်. Skydive ကိုလေ့လာရန်နည်းလမ်းမှာတွဲဖက်ခုန်ကူးခြင်းဖြစ်သည်. တစ်တွဲတွဲခုန်စဉ်အတွင်း, ခုန်ချခြင်းအားဖြင့်သင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းပြပေးမည့်နည်းပြဆရာတစ် ဦး ထံချည်နှောင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်. သငျသညျအတိုချုပ်လေ့ကျင့်ရေး session တစ်ခုယူရန်လိုအပ်သည်နေစဉ်, သင်ထိုနေ့တွင်ပင်ခုန်လိမ့်မည်. လေထီးခုန်ရန်လေထီးခုန်ခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းပြီးစိန်ခေါ်မှုလည်းဖြစ်သည်။ skydive ကိုလေ့လာရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာငြိမ်သောလိုင်းသင်ခန်းစာများဖြစ်သည်. ငြိမ်လိုင်းသင်ခန်းစာစဉ်အတွင်း, ကျောင်းသားသည်ခုန်မတိုင်မီလေးနာရီမှခြောက်နာရီအလေးအနက်လေ့ကျင့်မှုခံယူရသည်. နောက်ဆုံးခုန်ချမှုသည်လေယာဉ်နှင့်ကပ်လျက်တည်ငြိမ်သောမျဉ်းကြောင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သည်. အဆိုပါလိုင်းသည် Jumper များအတွက်မြည်သံကိုချထားပေးသည်, ထို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော Jumper သည်အချိန်တန်လျှင်သူ၏အဖွင့်ကိုမဖွင့်နိုင်ဟူသောစိုးရိမ်မှုများကိုဖယ်ရှားပေးသည်. Skydive ကိုလေ့လာရန်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာအခမဲ့ကျသောသင်ခန်းစာများဖြစ်သည်. ဤညွှန်ကြားချက်အမျိုးအစားစဉ်အတွင်း, ကျောင်းသားများသည်နာရီပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်မှုခံယူရသည်. သူတို့ဟာသင်တန်းပို့ချသူနှစ် ဦး နဲ့အတူအမှန်တကယ်ခုန်ကြပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်ငါးဆယ်စက္ကန့်အခမဲ့ကျဆုံးခြင်းခံစားရရန်အခွင့်အလမ်းရ. skydive သင်ယူဖို့နေစဉ်, သင်၏နည်းပြဆရာနှင့်ပတ်သတ်သည့်မေးခွန်းများမေးရန်အရေးကြီးသည်. Skydiving သည်အလွန်အန္တရာယ်များသောအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်, သင့်လျော်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားပါကအလွန်ပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်. အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းပို့ချသူများ၏သင်ခန်းစာသည် skydive ကိုသင်ယူရန်ကူညီနိုင်သည်. Skydive ကိုလေ့လာသည့်အခါတိမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါ
Humminbird Matrix 77 – ငါးရှာဖွေခြင်းအတွက်ထူးခြားသောလက္ခဏာများ
ရေအောက်မှာဖုံးကွယ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိလား, သို့မဟုတ်ပါကငါး၏သန္တာကျောက်တန်းဖြစ်သည်? အဆိုပါ Humminbird Matrix လျှင် 77 အသုံးပြုသည်, သငျသညျမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအိုင်သို့မဟုတ်မြစ်၏မျက်နှာပြင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာကိုသိပါလိမ့်မယ်. သင့်ကိုလမ်းပြရန် fishfinder တစ်ခုကိုအသုံးပြုသောအခါသင်၏ငါးကိုရှာဖွေခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးအမြတ်အစွန်းပိုရနိုင်သည်. Humminbird Matrix မှရရှိသောအရည်အသွေးမြင့်မားမှုနှင့်မြင့်မားသောရှင်းလင်းပြတ်သားမှုများကိုသင်တွေ့ရှိရ။ ကျေနပ်ပါလိမ့်မည် 77. ဤငါးရှာစက်သည်သင့်အားငါးများကိုအိမ်သို့ယူဆောင်လာရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုသံသယမရှိပါ. ငါးတွေဘယ်မှာလဲ? Matrix 77 ပိုကောင်းသူတို့ကိုရှာတွေ့မှတပ်ဆင်ထားသည်. Matrix ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ 77 ငါးလက်မပါဝင်သည်, တိုးမြှင့်အတူ TFT display ကို, မြင်နိုင်သောမြင်ကွင်း. ဤအရာအားလုံးသည်ရေအောက်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာကိုမြင်ရန်မည်မျှလွယ်ကူကြောင်းရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်. ဒါဟာအောက်ခြေမှာဘာသင်ပြောပြလိမ့်မယ်. DualBeam PLUS ၏ကျယ်ပြန့်သောလွှမ်းခြုံမှုကြောင့်ရေအောက်တွင်မည်သည့်အဆောက်အအုံများရှိသည်ကိုလည်းရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်. အဲဒီမှာအဲဒီမှာပုန်းအောင်းနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ငါးရှိလျှင်, သင်သိလိမ့်မယ်. သငျသညျကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာပေးခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ငါးကိုရှာဖွေနိုင်စွမ်းပိုကောင်းပါလိမ့်မည်. သင့်တွင်အဆင်ပြေသည့် tilt နှင့် display ၏ mount ရှိသည်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏လက်ကိုငါးမျှားတံ၌ထားနိုင်သည်, fishfinder နှင့်အတူ fiddling အစားလှေသို့မဟုတ်နို့တိုက်ကျွေးရေးလိုင်းလမ်းပြ. Real Time Sonar နှင့်အတူ, အဆိုပါ Matrix 77 သငျသညျရေအောက်မှာအစဉ်မပြတ်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုသိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရပ်များနှင့်အတူငါး၏လှုပ်ရှားမှုများကိုနောက်သို့လိုက်ရန်ခွင့်ပြုအမှန်တကယ်အချိန်အတွက်ဖြစ်ပျက်နေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်. ဤအင်္ဂါရပ်အားလုံးသည်သင့်အားအိမ်သို့ငါးများပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်. Sonar သည်သင့်အားအောက်ဖော်ပြပါအရာများကိုပြောပြခြင်းဖြင့်သင့်အားမှန်ကန်သောနေရာများသို့ညွှန်ကြားသည်. GPS အဆင်သင့်ဖြစ်မှုသည်သင်၏တည်နေရာကိုသိရှိရန်ကူညီနိုင်သည်, သူတို့အားဟော့စပေါ့များကိုရှာဖွေရန်အလွန်ကြီးသည်! Matrix 77 သင်ထွက်သည့်အခါတိုင်းအိမ်သို့ငါးများကိုကူညီရန်ဤကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးကိုပေးထားသည်. Humminbird Matrix 77 – ငါးရှာဖွေခြင်းအတွက်ထူးခြားသောလက္ခဏာများ
အပန်းဖြေဖို့လာတဲ့အခါ, သင်၏ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အပန်းဖြေမှုဆိုင်ရာသင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများသို့ခရီးစဉ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်သည်ဘာမျှမဟုတ်ပါ. scuba နိူးသည်, ရေငုပ်သင်္ဘောအပန်းဖြေစခန်းသို့လည်ပတ်ခြင်းသည်အားလပ်ရက်၏ပြယုဂ်ဖြစ်နိုင်သည်, သူတို့အနားယူနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ, သူတို့ကိုယ်သူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်, သူတို့လိုချင်သလောက် scuba နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ရန်. ရေငုပ်သမားအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုတွင်ရေငုပ်သမားများသည်သူတို့လုပ်ချင်သောအရာကိုသာအာရုံစိုက်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီးထိုထက် ပို၍ အားလပ်ရက်လည်းမရှိပါ. ရေငုပ်သင်္ဘောရေငုပ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရေပန်းစားသည်; သင်ရောက်ရှိနေသည့်ဒေသအပေါ် မူတည်၍ အတွေ့အကြုံများမှာကွဲပြားသည်. ရေငုပ်သင်္ဘောအပန်းဖြေစခန်းရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုဖြင့်စတင်သည်. သင်နေထိုင်သောနေနှင့်နေ၏နွေးထွေးမှုကိုတပ်မက်သောနေရာသည်ဆောင်းရာသီဖြစ်ပါက, ထို့နောက်တစ်နှစ်ပတ်လုံး scuba ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်နေရာများစွာသို့သွားပါ; ဖလော်ရီဒါသော့ချက်များ, တောင်အမေရိက, နှင့်ကာရေဘီယံ. သင်စိတ် ၀ င်စားသောအင်္ဂါရပ်များရှိမရှိသင်ဆုံးဖြတ်ရန်စိတ်ဝင်စားသောရေငုပ်သင်္ဘောအပန်းဖြေစခန်းအားစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ. ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ် ဦး အထူးသဖြင့်ရေငုပ်သမားမှတဆင့်အသိအမှတ်ပြု scuba ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းပြချင်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်သည်ထိုဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းသောရေငုပ်သင်္ဘောအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်. မင်းရဲ့ဂီယာကိုယူဆောင်မယ့်အစားသင်က Scuba ပစ္စည်းတွေကိုငှားချင်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်အငှား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ရေငုပ်သင်္ဘောအပန်းဖြေစခန်းကိုရှာပါ. ပြည့်စုံသောသုတေသနလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အင်တာနက်သည်စတင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်အပန်းဖြေစခန်းများ၏စာရင်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, သူတို့ပူဇော်သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်စျေးနှုန်းများသူတို့ရဲ့အကွာအဝေး. ဤနည်းဖြင့်သင်၏ဘတ်ဂျက်လမ်းညွှန်ချက်များအတွင်းသင်နေထိုင်နေစဉ်အတွင်းသင်လိုချင်တာကိုရရှိရန်သေချာစေရန်သင်ဆိုင်ကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်. Scuba-related မဂ္ဂဇင်းများသည်ပြီးပြည့်စုံသောရေငုပ်သင်္ဘောအပန်းဖြေစခန်းရှာဖွေခြင်းအတွက်အကြံဥာဏ်များပေးနိုင်သည်. အထူးသဖြင့်အပန်းဖြေစခန်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလေ့လာသည့်ရေငုပ်သမားဝါသနာရှင်များ၏ကိုယ်တွေ့အစီရင်ခံစာများကိုသင်သေချာပေါက်တွေ့လိမ့်မည်. သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်သောရေငုပ်သင်္ဘောအပန်းဖြေစခန်းသည်သင်မှတ်မိရန်အတွေ့အကြုံရှိလိမ့်မည်. ရေငုပ်သင်္ဘောအပန်းဖြေစခန်းသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း
အသက်အကြီးဆုံး (ဒါပေမယ့်ပညာရှိမဟုတ်ပါဘူး) ကမ္ဘာ့ဖလားတွင်လိဂ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် 1888, နှင့်အစပိုင်းတွင်ပါဝင်သည် 12 အင်္ဂလန်၏ midlands နှင့်မြောက်ဘက်ရှိကလပ်. အက်ဖ်အေဖလား, အရာကန ဦး စကော့တလန်နှင့်တောင်ပိုင်းနှစ် ဦး စလုံးနှုတ်ဆက်ပြီး “မဟုတ် – လိဂ်” ကလပ်, ပြီးသားကတည်းကသွားခဲ့သညျ 1872. စကော့တလန်ကလပ်များပါ ၀ င်ရန်ကြီးထွားမည်ဟုမျှော်လင့်သောကြောင့်၎င်းကိုအင်္ဂလိပ်လိဂ်ဟုမခေါ်ဆိုပါ, ဒါပေမယ့်ဒီနောက်ပိုင်းမှာ (1890) အစားသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိဂ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်. ဒုတိယပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်ဘက် Football Alliance တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည် 1892, နှင့် 1899 အဲဒါရှိတယ် 36 အသင်းဝင်အသင်းများ. အစပိုင်းတွင်အောက်ခြေအသင်းလေးသင်းသည်လျှောက်ထားခဲ့ရသည် (ပြန်လည်) – ရွေးကောက်ပွဲ, ဒါပေမယ့်ဒီသုံးလျှော့ချခဲ့သည် (1895/6), ထို့နောက်နှစ်ခု (1898/9), လေးပြန်သွားမီ (ဒေသဆိုင်ရာဌာနခွဲ ၃ ခုအတွက်နှစ် ဦး စီ) in 1920/1. အကြား 1893 နှင့် 1898 “စမ်းသပ်ပွဲ” (ကစား၏အစောပိုင်းပုံစံ – ချွတ်) နှစ်ခုကွဲပြားခြင်းအကြားမြှင့်တင်ရေးပြissuesနာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်. အဆိုပါလိဂ်အကြားတော့ဘူး 1915 နှင့် 1919 ပထမကမ္ဘာစစ်အဘို့, ဒါပေမယ့်နှင့်အတူအဆုံးစွန်သောနှစ်တွင်ပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည် 40 ကလပ်. အဆိုပါလိဂ်နေဆဲအကြီးအကျယ်မြောက်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည် – နှင့် Midlands – အခြေခံ, ဒါအတွက် 1920 နီးပါးပြိုင်ဘက်တောင်ပိုင်းလိဂ်၏ပထမ ဦး ဆုံးဌာနခွဲတစ်ခုလုံးကို FL-s တတိယတပ်မအဖြစ်ကိုလက်ခံခဲ့သည်. နောက်နှစ်တွင်ဒေသဆိုင်ရာဌာနခွဲ (၂) ခုကိုပြုလုပ်ရန်အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းရှိကလပ်အသင်းများကိုထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်, မြောက်နှင့်တောင်. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အဘို့နောက်တဖန်ရပ်တန့် (1940 – 1946), ကတိုင်း၏ဖန်တီးမှုကိုမြင်တော်မူ၏4in 1958, လေးကလပ်အားဖြင့်တိုးချဲ့ 92 in 1959 နှင့်လိဂ်ဖလားရဲ့ start 1960. အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမိုင်း
ကမ္ဘာကြီးသည်နေ့တိုင်းပိုမိုမြန်ဆန်စွာတိုးတက်နေသည်. ယနေ့ရရှိနိုင်သောနည်းပညာ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏနှင့်အတူ, ငါတို့အရင်ကလုပ်ခဲ့တာတွေထက်အများကြီးပိုမြန်တဲ့အရာတွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်. အမှုအရာပိုမိုမြန်ဆန်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်သော်လည်း, ငါတို့သည်လည်းအများကြီးပိုအိမ်မှာငါတို့ထံမှမျှော်လင့်ထားပါပြီ, အလုပ်မှာ, နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်. ဤတာ ၀ န် ၀ တ္တရားရှိမှုနှင့်အတူအကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာစိတ်ဖိစီးမှုများလာခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာသည်. စိတ်ဖိစီးမှုကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ပိုင်းအရအနားယူနိုင်ရန်သင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ မှအနားယူရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။. သင်၏အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းမြို့မှဝေးဝေးရှောင်မသွားပါက, မင်းတကယ်အနားယူနိုင်တယ်ဆိုတာငါမယုံဘူး. မင်းရဲ့အားလပ်ရက်မှာသင်လုပ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးကတော့ငါ့အတွက်ငါးဖမ်းခြင်းခရီးပဲ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါးဖမ်းတာကအနားယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ. ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးငါးဖမ်းခရီးစဉ်တစ်ခုမှာရေကန်ပေါ်ရှိပုဏ္ဏားလှေကိုထုတ်ယူခြင်းဖြစ်သည်. ဤခရီးစဉ်သည်အလွန်နှေးကွေးပြီးအပန်းဖြေရန်ဖြစ်သည်, အလွန်အဆင်ပြေ. pontoon လှေပေါ်တွင်ပါ ၀ င်သောအရာများအတွက်သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်သောအရာသည်သင့်အားအရာခပ်သိမ်းမှကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်. ထို့အပြင်ပုဏ္ဏားလှေပေါ်တွင်စီးနင်းခြင်းသည်အလွန်ချောမွေ့သည်, အကယ်၍ သင်မလိုချင်လျင်မြန်မြန်ရွေ့လျားစရာမလိုပါ. ရေချိုငါးဖမ်းခြင်းသည်ရေငန်ငါးဖမ်းခြင်းထက်အနည်းငယ်နှေးကွေးသောနှုန်းဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်တွေကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့အချိန်အများကြီးရလိမ့်မယ်. သင်၏အားလပ်ရက်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ပိုနှစ်သက်ပါက, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲအချို့သောအနားယူရရန်လိုအပ်သည်, သို့ဖြစ်လျှင်ငါးမန်းတွင်ငါးဖမ်းခရီးသည်သင်၏လမ်းကြားသို့ရောက်သွားနိုင်သည်. ငါးမန်းငါးဖမ်းခြင်းသည်သင့်အားကိုက်ခြင်းအကြားအနားယူရန်ခွင့်ပြုသည်, ဒါပေမယ့်သင်ကကြီးမားတဲ့ငါးမန်းကိုဆင်းဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှာကြီးမားတဲ့ adrenaline အလုအယက်ပေးပါတယ်. ထို့အပြင်ငါးမန်းများထွက်ခွာသည့်နေရာများသည်များသောအားဖြင့်အလွန်လှပသည်, ဒါကြောင့်သင်ဟာငါးမန်းတွေကိုမဖမ်းမိတဲ့အခါရှုခင်းကိုခံစားနိုင်ပါတယ်. မည်သည့်ခရီးစဉ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါစေ, ငါးဖမ်းခြင်းသည်အပန်းဖြေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ငါးဖမ်းခြင်း: စိတ်သက်သာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း